काठमाण्डौ । हरेक मानिसको आफ्नो योग्यताअनुसारको जागिर खोज्ने र आफू तथा आफ्नो परिवारका लागि आरामदायी जीवनको सुरक्षा गर्ने सपना हुन्छ। तर, सबैले आफूले सोचेजस्तो र आफ्नो योग्यताअनुसारको जागिर पाउन सकेका हुँदैनन्। नेपालमा एउटा त्यस्तो रोजगारदाता पनि छ, जसले जागिर लगाइदिएमार्फत एक रुपैयाँ पनि शुल्क लिँदैन। त्यतिमात्र हैन जागिर खोज्न...
काठमाण्डौ । नेपाली सेनाले सैन्य पदमा ठूलो संख्यामा नयाँ भर्ना गर्न दरखास्त आह्वान गरेको छ। नेपाली सेनाले रिक्त रहेको सैन्य पदमा खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नका लागि दरखास्त आहवान गरेको हो। सैन्य पदमा कुल ४ हजारजना नयाँ भर्ना गर्न नेपाली सेनाले दरखास्त खुला गरेको छ। सैन्द पदमा खुलातर्फ २ हजार ९८ जना, कर्तव्य...
काठमाण्डौ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले थुप्रै संख्यामा विभिन्न विषयका शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। संस्कृत विश्वविद्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गरी प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक र वरिष्ठ सहायकसहित विभिन्न पदमा शिक्षक र कर्मचारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। रिक्त पदहरुमा बढुवा, खुला तथा आन्तरिक...
ब्रिटिस गोर्खा र सिंगापुर पुलिसमा नयाँ भर्ना खुल्दै, के–के चाहिन्छ योग्यता ?
काठमाण्डौ । ब्रिटिस गोर्खा र सिंगापुर पुलिसमा भर्ना हुनका लागि यही चैत २१ गतेबाट आवेदन खुला गरिने भएको छ। विगतका वर्षहरुमा जस्तै २०२३ का लागि ब्रिटिस गोर्खा र गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिंगापुर पुलिस फोर्समा नयाँ भर्ना खुला गर्न लागिएको हो। इच्छुक उम्मेदवारले अनलाइनमार्फत आउँदो वैशाख २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। अनलाइनमार्फत...
काठमाण्डौ । नेपाली सेनामा ५० जना डाक्टरसहित विभिन्न प्राविधिक पदमा १९४ जनाका लागि नयाँ भर्ना खुलेको छ। नेपाली सेनामा रिक्त रहेका लेखा उपसेनानी, डाक्टर उपसेनानी, पाइलट उपसेनानीसहित विभिन्न प्राविधिक सेवातर्फका २९ अधिकृत पदका लागि नयाँ भर्ना खुलेको हो। सबैभन्दा धेरै एमबीबीएस डाक्टर (उपसेनानी) ५० जना माग गरिएको छ। लेखा (उपसेनानी) ४० जनाका...
यी बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुमा जागिर खुल्यो, थुप्रैलाई अवसर
काठमाण्डौ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुमा ठूलो संख्यामा जागिर खुलेको छ। एनआईसी एसिया बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, गोखार्ज फाइनान्स र सगरमाथा इन्स्योरेन्समा जागिर खुलेको हो। एनआईसी एसिया बैंकले विभिन्न विभागमा काठमाण्डौका लागि असिस्टेन्ट, सिनियर असिस्टेन्ट, सुपरभाइजर, जुनियर अफिसर, अफिसर र सिनियर अफिसरका...
काठमाण्डौ । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न दरखास्त आह्वान गरिएको छ। नेपाल प्रधान कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न दरखास्त आह्वान गरेको हो। इच्छुक उम्मेदवारले चैत ६ गतेदेखि चैत ११ गतेसम्म दरखास्त दिनुपर्नेछ। दरखास्त फाराम महानगरीय प्रहरी परिसर (काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर) र...
नेपाल बैंकमा ठूलो संख्यामा जागिर खुल्यो, प्लस टु गरेकालाई विशेष अवसर
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमिटेडले ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। बैंकले विभिन्न पदमा २७३ जना कर्मचारी भर्ना गर्न दरखास्त आह्वान गरेको हो। इच्छुक उम्मेदवार आजैबाट अनलाइन दरखास्त पेस गर्न सक्नेछन्। बैंकले सातवटै प्रदेशअन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरुका लागि सहायक (चौथो तह) पदमा १४८ जना भर्ने गर्ने भएको छ।...
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड विभिन्न पदमा थुप्रै कर्मचारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। बैंकले काठमाण्डौसहित देशभरका विभिन्न शाखाका लागि असिस्टेन्टदेखि सिनियर अफिसर पदसम्म कर्मचारी पदपूर्ति गर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। बैंकले डिजिटल पार्टनरसिप, डिजटल एडोप्सन एन्ड च्यानल माइग्रेसन, इएफटी स्विच, वेबसाइट एन्ड...
काठमाण्डौ । लोकसेवा आयोगले नायब सुब्बा पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। आयोगले बुधबार सूचना निकालेर राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी अप्राविधिक खुला तथा समावेसी नासु पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। खुला तथा समावेशीबाट विभिन्न सेवा समूहमा २०० भन्दा बढी पदमा दरखास्त खुलाइएको छ। इच्छुक उम्मेदवारले आगामी माघ १८ गतेसम्म दरखास्त दिन...
काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगममा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशक छनोट तथा सिफारिस समितिले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी दरखास्त आह्वान गरेको हो। इच्छुक व्यक्तिले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट २१ दिनभित्र दरखास्त दिन दिन सक्नेछन्। कार्यकारी...
काठमाण्डौ । नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट पदमा नयाँ भर्ना खुलेको छ। नेपाली सेनामा रिक्त कुल २२९ अधिकृत क्याडेट पदमा खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट पदप्रर्ति गर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको हो। योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले नेपाली सेनाको आधिकारिक वेब साइट www.nepalarmy.mil.np बाट अलनलाइन दरखास्त फाराम भरी सोको प्रिन्ट आउटसहित स्वयं...
सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा जागिर खुल्यो, १३०९३ जनालाई अवसर (सूचनासहित)
काठमाण्डौ । शिक्षक सेवा आयोगले सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा नयाँ शिक्षक भर्ना खुलाएको छ। आयोगले आज सूचना प्रकाशित गर्दै ७७ जिल्लाका लागि प्रावि तहमा १३ हजार ९३ जना शिक्षक पदपूर्ति गर्न दरखास्त आह्वान गरेको हो। जसमा खुला ७ हजार २०३, महिला १ हजार ८५४, दलित महिला ६० र मुस्लिम महिला ३० जना पदपूर्ति गरिने भएको छ। यसैगरी आदिवासी...
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा जागिर खुल्यो, प्लस टु गरेकालाई पनि अवसर
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले जागिर खुलेको छ। कम्पनीमा चौथो तहदेखि नवौँ तहसम्म खुला प्तियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्ति गर्नका लागि दरखास्त खुलेको हो। कम्पनीले सहायक ‘ख’ (चौथो तह) मा ६ र सहायक ‘क’ (पाँचौँ) मा ४ जनाका लागि दरखास्त खुलाएको छ। यसैगरी सूचना प्राविधिक अधिकृत (छैटौँ तह) मा २ जना र सूचना प्राविधिक...
ठूलो संख्यामा माध्यमिक शिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान, कुन–कुन विषयमा कति ? (सूचनासहित)
काठमाण्डौ । शिक्षक सेवा आयोगले ठूलो संख्यामा माध्यमिक तहमा नयाँ शिक्षक भर्ना खोलेको छ। आयोगले सातै प्रदेशमा माध्यमिक तह (तृतीय क्षेणी) शिक्षक पदमा विभिन्न विषयमा गरी कुल १ हजार ५४८ शिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। इच्छुक उम्मेदवारले शिक्षक सेवा आयोगको आधिकारिक अनलाइन दरखास्त प्रणालीमार्फत अनलाइन दरखास्त दिनुपर्न�...